Maandeeq Reciever/Router oo adeegeeda balaarisay | puntlandi.com
Saturday, January 16th, 2016 | Posted by Pi
Maandeeq Reciever/Router oo adeegeeda balaarisay
Shirkada Maandeeq ee Reciever/Router waxay balaarineysaa Adeegyadeeda Chanalada aad daawa taan, Adeegyada cusub waxaa kamid ah awooda Routerka oo sare loo qaadayo marka aad isticmaalayso internet daciifa.
Chanalada waxaa laga dhigayaa HD, Waxaan kaloo wadnaa Adeeg hufan oo aad Chalada si deg deg ah oo aan googo lahayn aad u daawan doontaan.
Markuu sanadku kaa dhaco waxaan kuu sameyneynaa oo hada diyaariney adeeg casri ah oo si sahlan aad u cusbeynaysiin karto.
Shirkada Maandeeq waxay dhamaan shacabka Soomaaliyeed ugu bishaaraynaysaa in la sameeyey Reciever/Router cusub oo aad ka daawan karto Dhamaan Kanaalada Soomaaliga saxan la’aan, Router-ka wuxuu kaaga baahan yahay oo qura Internet. Dhamaan Kanaalada Soomaaliga markaad ka daawanayso wayka faseexsan yihiin Dadka isticmaala Saxanka, aad ayayna u saraysaa tayadiisu, Marka roobku da’ayo maleh tashuush ama kanaal lawaayo. waxaa xitaa ku jira Puntland TV 24 saac.
Maandeeq TV Waxaa dadweynaha Soomaaliyed ee ku dhaqan dhamaan Dunida dacaladeeda La Ogeysiinayaa in loo kenaay Receiver Cusub oo lagu magacaabo MAANDEEQTV. Hadaba Receiver-kani waxaad ka heli kartaan amaba aad ka daawan kartaan dhamaanba TVyada Afka soomaaliga ku baxa, kuwa Afka Carabiga ku baxa, Channalada wararka ee caanka ah oo ay ka mid yihiin CNN, BBC, Aljazeera iyo qaar kale. Sidoo kale waxaad ka daawan kartaa dhamaan TV-Yada Africa ka soo baxa iyo Asia. Waxaa kaloo Intaas kuu dheer Inaad ka heli kartaan dhamaan TV yada Cayaaraha (Sports).Aduunka meel walbood aad joogto waad isticmaali kartaa Bokiskaan si aad u daawato Kanaalada Soomaalida, Yurub Amerika, Afrika , Aasiya ama Australia.
Wixii faahfaahin ah daawo labadaan Video
Hoosna ka eeg wakiilada shirkada ee Wadankaaga